ဘောင်ကျော် X the Line | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Ideas & Plans » ဘောင်ကျော် X the Line	13
ဘောင်ကျော် X the Line
Posted by Ma Ma on Aug 19, 2015 in Ideas & Plans | 13 comments
ကိုယ့်ကို ဘောင်ကျော်တယ်လို့ အပြောခံရရင် အောင့်သက်သက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘောင်ကျော်ခံလိုက်ရတဲ့ အရသာကလည်း ခါးသက်သက်ပါပဲ။ ခုရက်ထဲမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဒေတာတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့သိသွားမှန်းမသိပဲ လုပ်ငန်းတူတွေကြားထဲမှာ ချပြတာ ခံလိုက်ရတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ အသိပေးချင်တာ မဟုတ်တာကို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ သိအောင် ကြိုးစားပြီး အများသိအောင် ချပြလိုက်တာ ဘောင်ကျော်တာပဲပေ့ါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲရဲ့ ဒေတာတင်မဟုတ်၊ လုပ်ငန်းတူတခြားသူတွေရဲ့ဒေတာတွေကိုလည်း ကိုယ့်နည်းတူပဲ လုပ်တာမို့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး။
လူကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ ဒါဟာစဉ်းစားရင် မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။
လုပ်လိုက်တဲ့သူကတော့ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်ရှိတယ်လို့တောင် ခံစားမိရဲ့လား မသိဘူး။
ခံရတဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့။
(ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ တထိုင်တည်းချရေးတဲ့ ပိုစ့်၂ပုဒ် ဆက်တိုက်တင်လိုက်တယ်။
အမှတ်တရပေ့ါ။) About Ma Ma
မြစပဲရိုး says: မမ ကို မှတ်ချက် ပေးပြီး သများလဲ ပန်းဝင် လိုက်ပြီ။
Ma Ma says: နှစ်ယောက်တပြိုင်နက်ပန်းဝင်လို့ သဂျီးချုံးပွဲချငိုပြီး မြန်မာပြည်ရေထပ်ကြီးရင် ဒီသွေးသောက်ညီအမ၂ယောက် ပယောဂမကင်း ဖြစ်နေအုံးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အခု တော့ ပို့စ် ကို မန့် မယ်။
ကျွန်မ သိသလောက် ရွှေပြည်ကြီး ထဲ တကဲ့ အရည်အချင်း နဲ့ အောင်မြင်တာထက် အကပ်အရပ် အမှီ အခို နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ တွေ များတယ်။
သူတို့ အနေ နဲ့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ က သူများ ကို ခြေထိုးပြီး မှ ရပ်တည်နိုင်တာ မို့ ကျင့်ဝတ်မဲ့ အောက်လမ်းနည်း တွေ ကို မျိုးစုံ သုံးနေတာ မဆန်းဘူး မမ ရေ။
ကိုယ့်အစ်မ ကိုလဲ ကလိန်ကကျစ် လုပ်သွားတာ ကြားလို့ စိတ်မကောင်းပါ။
စနစ် တစ်ခု ကို မပြင်နိုင်ရင် နောက်ဆို ပိုဆိုးမှာမို့ တိုင်းပြည် ရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” လက်ထဲကို အာဏာရအောင် ဝိုင်းပံ့ပိုး ကြဖို့သာရှိတော့တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နည်းးမှန် နဲ့ တက်လို့ မရရင်
အဆင့်တွေ ကျော်တက်လေ့ ရှိကြ သလိုပေါ့…
သူများး ပါစင်နယ်တွေ သိချင်ဇော အားးကြီးး သူများး ကို ပြောချင်ဇော အားးကြီးး တာလည်းး
အစဉ်အလာ တစ်ခု ဖြစ်မှန်းးမသိ ဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်ကျော်မှု တစ်ခုပေါ့လေ…
နောက်မှ ရေးးအူးးမယ်… ခုတော့
Congratulations, Chit Ma and A Yee
Da Gyee.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ပွိုင့် တစ်သိန်း ပြည့်အောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော
ခရီးရှည်ကြီးအတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ် မမရေ…။
အောင် မိုးသူ says: ကွန်ဂရက်ပါ တစ်သိန်းပြည့်ဖို့ ကြိုးစားဆဲပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .Congratulations အကြီးကြီးပါ အန်တီမမ နဲ့ အန်တီ မြစပဲရိုး…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပူးတွဲ နှစ်ယောက် တစ်သိန်းပြည့် တာ ဂေဇက် ရဲ့ ပထမဆုံးသော မှတ်တမ်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်
အခုခေတ် အပိုင်းမှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင် နည်းပညာခိုးယူမူ့တွေရှိတယ်
နည်းပညာတင်မဟုတ် လုပ်သက်ရင့် တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ၀န်ထမ်းကိုလည်း
အဲတော့ လုပ်ငန်းစီစဉ်သူတွေက သိုသိုသိပ်သိပ်ဘဲလုပ်ကြတာများတယ်
၀န်ထမ်းပိုင်းဆိုရင်လဲ အလုပ်ကိစ္စအားလုံးကို သိအောင်မထားဘဲ
Alinsett @ Maung Thura says: nz@ghi (103558 Kyats )
MaMa (100301 Kyats )
Khin Latt (100026 Kyats )
Anzartone (95099 Kyats )
မကြာသေးခင်ကမှ….အဘနီ.. လေးပေါက်…တို့ တစ်သိန်းစီ ပြည့်…
အခုလည်းတန်းကို စီ..လို့…. သဂျီးတော့…. ကြည့်ကြည့်ပြီး.. ဝမ်းနည်းရမလား ဝမ်းသာရမလား မသိ ဖြစ်နေပြီလားမသိ….
ဒါမယ့် သဂျီးက သထိန်းကြီးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: တဂျီး ကို ရှူဇေးဘူးလေး ဘာလေး ပေးလိုက်ကြဘာအူးးး
weiwei says: ကျွန်မအတွက်ကတော့ ဒီနှုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ top ten မှာ အကြာကြီး နေရအုန်းတော့မယ် …
ဘောင်ကျော်တဲ့ကိစ္စတွေက အစိုးရဌာနတွေမှာ ပိုပြီးဆိုးပါတယ် ..
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်တယ် … အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ခံလိုက်ရတာထက် အခုနောက်ပိုင်း ဖဘ လောကထဲမှာပါ ဖြစ်လာတာတွေ့ရလို့ အလွန်စိတ်ပျက်မိတယ် …
Ma Ma says: သဂျီးတော့ နှာနှပ်နေရပြီထင်တယ်။
မန့်တောင် မမန့်နိုင်ရှာတော့ပြီ။ ဘောင်ကျော်ပြီး လုပ်လိုက်မိလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ့်အစား
အဲဒီလို လုပ်နိုင်တာကို ဂုဏ်ယူနေတတ်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.